ခတျေမှီသားဆကျခွားနညျးလမျးမြား အပိုငျး(၁) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခုခတျေကာလမှာ အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသားမြား နညျးတူ အလုပျခှငျတှမှော ရငျဘောငျတနျး လုပျကိုငျနကွေပါတယျ။ ဒီလို အလုပျမြား planတှနေဲ့ ဘဝကွီး တညျဆောကျနသေူ မမ မြားအတှကျ အဆငျပွမေယျ နညျးလေးတှကေို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျနျော။
(၁ )လကျမောငျးထဲ ထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျးလေးမြား
၉၉ရာခိုငျနှုနျးလောကျကာကှယျပေးလို့ အရမျးထိရောကျတဲ့ပစ်စညျးလေးပါ အကွာကွီးနှဈနဲ့ ခြီ အာနိသငျရှိတော့ အလုပျမြားတဲ့ မမ တှအေတှကျ ကှကျတိပါ ။
ထညျ့တဲ့ အခြိနျလေးပဲ ဆရာဝနျနဲ့ ထညျ့ ဖို့လိုတာပါ အမြားဆုံး၁၅မိနဈပဲကွာတာမို့ အနညျးဆုံး ၃နှဈ ကနေ ၅ နှဈ အထိအာနိသငျ အပွညျ့ပါ အမာရှတျလညျးမထငျပါဘူး။ တခြို့ တှထေငျသလို သူမြားတှမှေ့ာလညျးမဟုတျပါဘူး အရပွေားအောကျမှာ ပဲ လကျမောငျးအလှမပကျြစပေါဘူး။ ဆေးကဒျလို နစေ့ဉျ မှတျပွီး သောကျနရေတဲ့ ဒုက်ခ လညျး ခြုပျငွိမျးစသေလို ၃လတခါ တငျပါးနာနရေတာတှေ ကငျးဝေးစပေါတယျ။ သားအိမျထဲ ထညျ့တဲ့ ပစ်စညျးလေး လို ရာသီလာပွီး ပွနျပွနျစမျးဖို့ လညျးမလိုပါဘူး။ ပွောရရငျတော့ ထညျ့ပွီးရငျ ဘာမှကို လှညျ့ကွညျ့စရာ မလိုတော့ဘူးလေ။
ဘယျသူတှနေဲ့ သငျ့လြျောသလဲ ?
ဆေးလိပျသောကျတဲ့ ခတျေမှီ မမ တှေ သှေးတိုးရောဂါရှိသူတှေ နို့တိုကျမိခငျတှေ အရေးပျေါတားဆေး တှသေောကျလိုကျ စိတျပူလိုကျ ဖွဈနသေူတှေ ကလေးယူဖို့ planခြ ထားသူတှေ အတှကျ အထူးသငျ့လြျောပါတယျ။
ရာသီရဲ့ဘယျအခြိနျမဆို ထညျ့လို့ရပါတယျ။ ထညျ့ပွီး ၇ရကျနေ အာနိသငျစပွပါတယျ။ အဲဒီ စစခွငျး ၇ရကျအတှငျးတော့ ကှနျဒုံးသုံးပေးဖို့လိုပါတယျ ဒါမှမဟုတျ အရေးပျေါဆေး သောကျဖို.လိုပါတယျ။ ကှနျဒုံးမသုးံ ခငျြရငျ ဆေး မသောကျခငျြ ရငျ ရာသီစစလာတဲ့ ရကျမှာ ထညျ့ပါ။
သူ့ကောငျးကြိုးလေးက ရာသီမြားပွီး ဗိုကျအောငျ့နာကငျြ ခံစားနတေဲ့ မမတှအေတှကျ ဝဒေနာ သကျသာဆေးတခုပါ။ သန်ဓလေညျး တား အကြိုးလညျး ရှိပေါ့နျော။ အကောငျးဆုံးက သားသားမီးမီးလိုခငျြပွီကှာလို့ လငျမယားဆုံးဖွတျပွီး ဒါလေးခကျြခငျြးထုတျ အမွနျဆုံး ကလေးရစတေတျပါတယျ တခြို့တားဆေးတှလေို မကွာဘူးနျော ။
ဆိုးကြိုးတှကေတော့ တခွားတားဆေးတှနေဲ့ယှဉျရငျ နညျးပါတယျ။ အဲတခုက လိငျမှတဆငျ့ကူးစကျတတျတာတှကေို ကာကှယျဖို့ကြ ကှနျဒုံးလိုအပျပါတယျ။ ဒီဆေးက တားဆေးပဲမို့ပါ။ စသုံးသုံးခွငျး ခေါငျးလေးမူးတာ စိတျတိုတာကတော့ ရကျပိုငျးလေးဖွဈတတျတယျ။ တခြို့က ရာသီထိနျတာ မမှနျတာဖွဈတတျတယျ ။ စိုးရိမျစရာမရှိပါဘူးနျော။ ဟျောမုနျးလေးတှကွေောငျ့ပါ။ ကလေးမလိုခငျြသေးဘူး၊ အလုပျရှုပျလို့ မလေ့ညျးမတေ့တျတယျ၊ အာရုံမနောကျခငျြဘူးဆိုတဲ့ မမတို့အတှကျတော့ သငျ့တျောမယျ့နညျးလေးပဲမို့ တငျပွလိုကျပါတယျ ။
ခုခေတ်ကာလမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားများ နည်းတူ အလုပ်ခွင်တွေမှာ ရင်ဘောင်တန်း လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီလို အလုပ်များ planတွေနဲ့ ဘဝကြီး တည်ဆောက်နေသူ မမ များအတွက် အဆင်ပြေမယ် နည်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
(၁ )လက်မောင်းထဲ ထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်းလေးများ
၉၉ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကာကွယ်ပေးလို့ အရမ်းထိရောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ အကြာကြီးနှစ်နဲ့  ချီ အာနိသင်ရှိတော့ အလုပ်များတဲ့ မမ တွေအတွက် ကွက်တိပါ ။
ထည့်တဲ့ အချိန်လေးပဲ ဆရာဝန်နဲ့ ထည့် ဖို့လိုတာပါ အများဆုံး၁၅မိနစ်ပဲကြာတာမို့ အနည်းဆုံး ၃နှစ် ကနေ ၅ နှစ် အထိအာနိသင် အပြည့်ပါ အမာရွတ်လည်းမထင်ပါဘူး။ တချို့ တွေထင်သလို သူများတွေ့မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး အရေပြားအောက်မှာ ပဲ လက်မောင်းအလှမပျက်စေပါဘူး။ ဆေးကဒ်လို နေ့စဉ် မှတ်ပြီး သောက်နေရတဲ့ ဒုက္ခ လည်း ချုပ်ငြိမ်းစေသလို ၃လတခါ တင်ပါးနာနေရတာတွေ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ သားအိမ်ထဲ ထည့်တဲ့ ပစ္စည်းလေး လို ရာသီလာပြီး ပြန်ပြန်စမ်းဖို့ လည်းမလိုပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ ထည့်ပြီးရင် ဘာမှကို လှည့်ကြည့်စရာ မလိုတော့ဘူးလေ။
ဘယ်သူတွေနဲ့ သင့်လျော်သလဲ ?
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ခေတ်မှီ မမ တွေ သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေ နို့တိုက်မိခင်တွေ အရေးပေါ်တားဆေး တွေသောက်လိုက် စိတ်ပူလိုက် ဖြစ်နေသူတွေ ကလေးယူဖို့ planချ ထားသူတွေ အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
ရာသီရဲ့ဘယ်အချိန်မဆို ထည့်လို့ရပါတယ်။ ထည့်ပြီး ၇ရက်နေ အာနိသင်စပြပါတယ်။ အဲဒီ စစခြင်း ၇ရက်အတွင်းတော့ ကွန်ဒုံးသုံးပေးဖို့လိုပါတယ် ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ်ဆေး သောက်ဖို.လိုပါတယ်။ ကွန်ဒုံးမသုးံ ချင်ရင် ဆေး မသောက်ချင် ရင် ရာသီစစလာတဲ့ ရက်မှာ ထည့်ပါ။
သူ့ကောင်းကျိုးလေးက ရာသီများပြီး ဗိုက်အောင့်နာကျင် ခံစားနေတဲ့ မမတွေအတွက် ဝေဒနာ သက်သာဆေးတခုပါ။ သန္ဓေလည်း တား အကျိုးလည်း ရှိပေါ့နော်။ အကောင်းဆုံးက သားသားမီးမီးလိုချင်ပြီကွာလို့ လင်မယားဆုံးဖြတ်ပြီး ဒါလေးချက်ချင်းထုတ် အမြန်ဆုံး ကလေးရစေတတ်ပါတယ် တချို့တားဆေးတွေလို မကြာဘူးနော် ။
ဆိုးကျိုးတွေကတော့ တခြားတားဆေးတွေနဲ့ယှဉ်ရင် နည်းပါတယ်။ အဲတခုက လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်တာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ကျ ကွန်ဒုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဆေးက တားဆေးပဲမို့ပါ။ စသုံးသုံးခြင်း ခေါင်းလေးမူးတာ စိတ်တိုတာကတော့ ရက်ပိုင်းလေးဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့က ရာသီထိန်တာ မမှန်တာဖြစ်တတ်တယ် ။ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးနော်။ ဟော်မုန်းလေးတွေကြောင့်ပါ။ ကလေးမလိုချင်သေးဘူး၊ အလုပ်ရှုပ်လို့ မေ့လည်းမေ့တတ်တယ်၊ အာရုံမနောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ မမတို့အတွက်တော့ သင့်တော်မယ့်နည်းလေးပဲမို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။